Kooxda Manchester United oo heshiis cusub ka saxiixanaysa mid ka mid ah xiddigaheeda | Saxil News Network
Kooxda Manchester United oo heshiis cusub ka saxiixanaysa mid ka mid ah xiddigaheeda
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay go’aansatay inay heshiis cusub ka saxiixato laacibkeeda boosaska badan ee Ashley Young, kaasoo ka ciyaari kara difaac, khadka dhexe iyo gabar weerar.
Tan iyo markii uu kooxda yimid macallin Jose Mourinho, Young ayaa ahayn dooqa koowaad ee tababaraha reer Portugal, laakiin 32-sano jirkaan ayaa hadda noqday mid fure u ah shaxda kooxda koowaad ee garoonka Old Trafford.
Wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa Ingiriiska ayaa warinaya in kooxda Man Utd ay isku diyaarinayso inay heshiis cusub ka saxiixato xiddigan xulka qaranka England, kaasoo boosas badan ka dheeli kara, iyadoo kooxdu ay doonayso heshiiskiisa ku darso 12 bilood oo dheeraad ah.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, wararku waxa ay intaa ku darayaan in wakiillada Young ay raadinayaan heshiis labo sano ah, taasoo xiddiga ku sii hayn doonta kooxda ka dhisan Waqooyi-Galbeed illaa sanadka 2020-ka.
Young ayaa 12 kulan ku soo bilowday safka hore ee kooxda Man Utd xilli ciyaareedkan, laakiin ciyaaryahanka ayaa qabsaday cinwaannada Wargeysyada waa weyn iyo shaashadaha habeenkii Taladaada, kaddib markii uu labo gool ugu shubay Watford kulankii Premier League ee ay booqdeen oo ay uga soo badiyeen 4-2.
Horraantii sanadkan, Young ayaa iska diiday dalab lacago waali ahaa oo uga yimid kooxda ka dhisan horyaalka Waddanka Shiinaha, Chinese Super League ee Shandong Luneng